Best meelaha bixinta raqiis ah music download
Haddii qof uu jecel yahay oo aad u maqashaan music farshaxan uu ugu jecel yahay, inuu u baahan yahay in la tixgeliyo xuquuqda halka uu isku dayo in la helo oo uu heeso uu jecel yahay. Waxa uu ka heli kartaa qaar ka mid ah ay ku fasaxeen in ay ka soo dejisan ama adeegyada muusiko dhegayso oo lacag la'aan ah si sharci ah. Inta badan dadka aan diyaar u ah inay awoodi qiimo weyn ku iibsato heesaha ay jecel yihiin. Doorashada ugu fiican iyaga u tahay adeegsiga music download goobta raqiis ah . Dadka si taxaddar marka aad dooranayso noocan ah goobaha ay leeyihiin. Waxay leeyihiin in ay hubiyaan in goobta samatabbixin music raqiis ah si sharci ah. Ka dib markii yihiin goobaha caanka ah kaas oo ku caashaqi jiray music jaban kala soo bixi kartaa heeso.
Part1: music archive Free
Part2: ganacsiga Qaylada
Part3: Amazon music Ra'iisul
1. music archive Free
Tani music madal fadhiyaan waxaa sameeyay xarun raadiye oo ah in la sameeyo music casriga ah kasta qaybaha heli karaan dadka. Iyadoo la aasaasay taas, saldhigga radio WFMU gacmaha la daraasiin curators. Sidaas darteed, tani goobta uu noqday loogu soo degsado music ah meesha ugu fiican. Site kani waxa uu isticmaalaa laba habab kala duwan ee lagu soo bandhigo kuwan raadkaygay. Qaabka ugu horeysay waxaa la jirrabo music xorta ah ay wadaagaan oo dhan curators wehelkaaga waa. Habka labaad waa waxa ha u isticmaala goobta si ay u wadaagaan music gaar ah u archives ee goobta. Inkastoo qaar ka mid ah kuwan raadkaygay burburin haysan qiimaha wax soo saarka, ma bixi laheyd users dime ah.
Dadka booqanaya goobta ka computer ka heli doontaa calaamad arrow hoos u socota si ay heesaha. By riixaya badhanka waxay soo bixi kartaa albums zip ama kuwan raadkaygay shaqsiyaad gal lala beegsaday.
Ganacsiga 2. Qaylada
Ganacsiga Buuqa waa qayb ka mid ah horumarinta iyo ka qayb madal music free. Online users karaa download mid ka mid ah kuwan raadkaygay shaqsi ama albums. Tani madal horumarinta free dhiiri isticmaala in ay ka hadlaan fannaaniinta ay jecel yihiin iyada oo Facebook iyo Twitter, halka iyaga siinayo fursad ay geddoomo artist deeqda yar. Interface ayaa user of this site waa mid fudud oo nadiif u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u baadhaan ama caleenta albums ama fanaaniinta effortlessly. Waxay ka raadin kartaa fanaaniinta xarun ah oo ay ku raran yihiin mixtapes complimentary iyo talooyinka oo taabanayay tiro balaadhan oo muusikiiste ah, munaasabadaha soo socda iyo qaybaha gudahood. Boggan waxa uu sidoo kale bixisaa daayo gaar ah iyo tusaalada ah ka fanaaniinta ka hor ay meelo kale sii daayo. Users ka heli kartaa xiriirada si aad u xiran bogagga warbaahinta bulshada ka mid ah fannaaniinta.
3.Amazon Ra'iisul music
Amazon waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee soo degsado music for free. Walmart oo ah web ay leedahay gorgortan bin weyn ee jaban iyo free mp3 downloads. Waqtiga qoraal, this site ayaa 46.706 Gurtida diyaar u ah oo lacag la'aan ah. Tirada weynaado si tartiib tartiib ah muddo ka dib. Waxa ugu fiican ee ku saabsan liiska freebies ee Amazon waa in dadka isticmaala si fudud u isticmaali kartaa music by sifayn. Xitaa waxay u sheegayaa tirada kuwan raadkaygay lacag la'aan ah laga heli karaa qayb kasta. Sida inta badan wax soo saarka Amazon, users dhowayn kara hoos u xulashadiisa ku salaysan dib u eegista macaamiisha ah. Si aad u download music ah in dadka isticmaala computer u baahan yihiin si loo soo dajiyo codsiga Amazon ee music. Kolkaasay waxay ku furi karin app iyo dhirtuba ay u music ah. Haddii aad xaq u guji album ama gabyi, waxaad ka heli doontaa download ikhtiyaarka ah oo guji. Tallaabada labaad waa jiiday iyo tagtey gabayadii xulay galay qaybta download ka heli galeeysid midig.
Waxaa jira codsiyada mobile la heli karo qalabka android iyo macruufka ka users meel kasta soo bixi karaan muusikadooda jecel. Mid ka mid ah dib u dhaca ah ee this site waa waxa ha isticmaala si ay u soo bixi songs ee qalabka la isticmaalayo app ah oo aan la wadaagi karto aaladaha kale. Users dhegaysan kartaa gabayadii la heli karo in qalabka ay kala soo bixi loo isticmaalo. Waxay dhegaysan kartaa playlists kuwa marka ay offline tahay.
MP3.com waa goobta ugu da'da weyn ee liiska. Waxaa la aasaasay sannaddii 1997. Inkasta oo maktabadda of this site ma aha weyn sida dadka isticmaala filayaa, weli waxay lahayd ururinta weyn oo muusiko ah. Boggan waxa uu bixiyaa sifayn kala duwan ee music sida Punk pop, jazz, biraha iyo hip hop. Goobta faanaa tiro balaadhan oo ah MP3s iyo qurbaan tiro badan oo ka mid ah heesaha user a ma ogaan karo meel kasta oo kale. Mid ka mid ah dib u dhaca ah ee this site waxaa u yaanay dadka isticmaala si ay u soo bixi album dhan.
Jamendo waa mid ka mid ah repositories ugu weyn ee music raqiis ah oo ku saabsan internetka. Boggan waxaa ku jira ku dhawaad ​​400,000 oo kuwan raadkaygay ka 40,000 fanaaniinta. Inkasta oo dadka isticmaala ma ka heli kartaa oo dhan fanaaniinta ay jecel yihiin in this site, ay ka heli karaan ka interface user dardargelisay ee goobta ka dhigaysa mid u weyn si ay u caleenta iyo fannaaniin heli cusub oo tayo leh. Users Deslaegn kara kuwan raadkaygay ay ugu soo bixi, caan, in la sii daayo dambeeyay ama ugu ciyaaray halkii Author music by sifayn. Ay caanka ah ee muusiga waxaa ku salaysan ratings isticmaalaha. Inkastoo ururinta weyn ee tareenka laga heli karaa bogga, users ilaalin kartaa maamulka ay waqtigooda ku baadhi karo oo la samaynaayo baaritaan iyada oo fikrado kor ku xusan. Raac tallaabooyinkan inay muusikada ee this site.
Iibsan link laga heli karaa dhinaca kore ee midig ee bogga Click. Create an account ah adigoo soo gudbinaya username iyo password ama isticmaal account facebook si aad u saxiixdo. Bogga ugu weyn ee aad ka heli doonaa doorashada menu in kuguna toosin kara kuwan raadkaygay ugu fiican ee todobaadkan ka. Marka aad dooratay wadada aad sidoo kale ku dari kartaa music si ay playlist ama download it.
> Resource > Music > Places Best Gudbinta Cheap Music Download